Global Voices teny Malagasy » Netizen Report: Mampidi-doza ireo mpikatroka antserasera ao Nizeria sy Rosia ny lalàna miady amin’ny “fanevatevana antserasera” · Global Voices teny Malagasy » Print
Netizen Report: Mampidi-doza ireo mpikatroka antserasera ao Nizeria sy Rosia ny lalàna miady amin'ny “fanevatevana antserasera”
Voadika ny 05 Aogositra 2019 6:05 GMT 1	 · Mpanoratra Netizen Report Team Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Nizeria, Rosia, Fandrahonana-lalàna, Hafanam-po, Mediam-bahoaka, Sivana, Tatitry ny Mpiserasera, GV Mpisolovava
Ny Madonna 7 ivelan'ny fitsarana. Sary nomen'i Vivien Douglas ary nahazoana alàlana.
Ny Advox Netizen Report dia manolotra topi-maso iraisam-pirenena momba ireo fanamby, fandresena ary fironana malaza amin'ny teknolojia sy ny zon'olombelona manerana izao tontolo izao. Ity tatitra ity dia mandrakotra ireo vaovao sy hetsika nanomboka ny 6 Jolay – 19 Jolay 2019.
Efa ela ny fitsipika manohitra ny “fanevatevana” an-tserasera no nasongadina tamin'ny heloka antserasera sy ireo lalàna hafa manokana momba ny aterineto manerana izao tontolo izao. Na dia mety ho natao hampihenana ny fanorisorenana antserasera aza izy ireo – izay mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahalalaham-pitenenana – dia mety ho azon'ny manampahefam-panjakana hararaotina hanakanana ny lahateny mitsikera amin'ny endrika politika.
Ohatra iray vao haingana tamin'ity fironana ity ny olana any Nizeria, izay maintimolaly sy mpianatra fito tao amin'ny Oniversite tsy miankina Madonna ao amin'ny Vinanin'i Niger, ao Nizeria no mety hiatrika sazy fito taona an-tranomaizina  noho ny lahatsoratra tamin'ny media sosialy izay manameloka ny fepetra sy fikarakarana ratsy mahazo ny mpianatra sy mpiasa ao amin'ny oniversiten'izy ireo. Manao fanentanana ho fanafahana azy ireo ny Nizeriana ao amin'ny media sosialy, ary miantso azy ireo hoe “Madonna 7.”
Toa nokendrena ny mpikambana iray ao amin'ny vondrona noho ny fitantanana vondrona WhatsApp izay niresahan'ny olona ny ahiahy momba ny fitantanana ny sekoly, anisan'izany ny fiampangana ireo mpitantana ho nanidy mpiasa iray izay nanakiana mafy ny politikan'ny sekoly.
Nomena fahafahana vonjimaika avokoa izy rehetra izy ireo tamin'ny 3 Jolay ary navotsotra tao amin'ny trano nitazomana azy ireo nanomboka ny volana martsa 2019 taorian'ny niampangana azy ireo tamin'ny lalànan'ny Heloka Antserasera ao Nizeria. Voampanga fa nandefa “hafatra diso” tamin'ny alàlan'ny media sosialy izy ireo ka niteraka “fahatezerana, fanelingelenana, loza, faniratsirana, fandratrana, fampitahorana bevata” tamin'ny Oniversite Madonna sy ny tompon'andraikitry ny fiarovana ao aminy,Titu Ugwu.
Nandritra izany fotoana izany, tany Rosia indray, nampangain'ny polisy  tao Novokuznetsk ho nanitsakitsaka ny lalàna volana Martsa 2019 noho ny “fanaratsiana” ireo manampahefam-panjakana tamin'ny aterineto tamin'ny 15 Jolay ilay mpikatroka Igor Gorlanov. Nizara rohy  tamin'ny lahatsoratry ny MediaZona momba an'i Yuri Kartyzhev, mpandrafitra izay nanana voninahitra mampisalasala ho olona voalohany voasazin'ny lalàna vaovao taorian'ny nanompany an'i Vladimir Potinina tao amin'ny VKontakte ity mpikatroka ity.
Tamin'ny 10 Jolay, nanamarika tao amin'ny fantsony Telegram i Pavel Chikov, mpisolovava iray miaraka amin'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Agora fa raha tamin'ny fanisana nataony, dia nahatratra 20 mahery ny raharaham-pitsarana napetraka momba ny lalàna vaovao manohitra ny fanevatevana manampahefana.
Fanentanana amin'ny Twitter mikendry ireo mpanao gazety “anti-Pak” any Pakistan
Tamin'ny 5 Jolay, nalaza tao amin'ny Twitter niaraka tamin'ny sioka maherin'ny 28000 nozaraina tao anatin'ny ora vitsy ny #ArrestAntiPakJournalists (Sambory ireo mpanao gazety anti-Pak). Niparitaka avy hatrany ny farangoteny rehefa nandefa  sioka mitaky ny fisamborana ireo mpanao gazety avy amin'ilay tondroin'izy ireo fa “vondrona media mpomba ny Indiana, anti-Pakistana” ny kaonty Twitter antsoina hoe @IK_Warriors. Narahana sary misy ny lisitr'ireo mpanao gazety atao lasibatra ny sioka izay niantso ny hafa hanatevin-daharana ny fanentanana.
Nikendry indrindra ireo mpanao gazety mitsikera ny governemanta sy ny miaramila ireo sioka. Ahitana ny sarin'i Khan sy ny fangon'ny antokon'ny fitondrana, Pakistan Tehreek-e-Insaaf  na PTI ny kaonty Twitter @IK_Warriors (manondro ny praiminisitra Imran Khan  ny IK). “Mijoro ho an'ny marina sy ny zo [sic] izahay”, hoy ny vakin'ny lahatsoratra fohy ao amin'ny kaonty @IK_Warriors. Mpilalao cricket lasa mpanao politika izay niasa nandritra ny herintaona monja, nilaza ireo mpitsikera an'i Khan fa izy no notsongain'ny miaramila.
Mamaly ny tenirohy #ArrestAntiPakJournalists, nilaza tamin'ny Global Voices i Mubashir Bukhari , lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Truth Tracker, hoe:
Izay rehetra manome vahaolana hafa ankoatra ny politikam-panjakana na miaramila no antsoina hoe anti-Pakistan na mpamadika. Tsy vitany hoe mandrahona sy mampihorohoro ny mpanao gazety ny fironana tahaka izany fa mampidi-doza ny fiainan'ny mpanao gazety ihany koa.
Niverina ao Maoritania ny aterineto amin'izao fotoana izao aloha
Namerina ny fidirana amin'ny aterineto  ny manampahefana Maoritaniana rehefa nanakorontana izany nandritra ny 10 andro taorian'ny fifidianana filoham-pirenena nampifamaly tamin'ny 23 jona ary niteraka fihetsiketsehana. Voalaza fa nandidy ny fanakatonana noho ny antony ara-piarovana ny minisiteran'ny atitany, na dia mino aza ireo mpikatroka sy ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa ny hanakanana  ny mpanohitra tsy hanetsika ireo mpanao fihetsiketsehana no tena tanjona.
Manery ny MTN tsy hanapaka ny aterineto ao Sodàna ireo mpîkatroka
Miantso ny orinasan'ny fifandraisan-davitra MTN ny firaisan'ireo vondrona mpiaro ny zo nomerika sy ny fahalalaham-pitenenana mba handà ny fangatahan'ny governemanta hanakorontana ny fidirana amin'ny aterineto taorian'ny fanakatonana naharitra dimy herinandro tao Sodàna. Nampiharan'ny MTN any Afrika Atsimo, izay mpamatsy tolotra aterineto lehibe indrindra ao amin'ny firenena ny fanakatonana satria nanao famoretana mahery vaika tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana milamina ny miaramila, nanapaka ny zotra lehibe fitateran'ny olona ireo tranga fanararaotana sy hahazoana tolotra ara-pitsaboana maika. Milaza ny taratasy misokatra nosoniavin'ny Access Now, African Freedom of Expression Exchange, Komity Mpiaro ny Mpanao gazety, NetBlocks, Paradigm Initiative sy ny hafa fa tamin'ny fanakatonana ny aterineto, nandray anjara tamin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny orinasa.
Miara-miasa amin'ireo mpanamboatra teknolojia fanaraha-maso any Shina ny IBM sy Google. Tokony ho gaga ve isika?
Miara-miasa amin'ny orinasa shinoa Semptian ny OpenPOWER Foundation , vondron'orinasa tsy mitady tombom-barotra tarihan'ny Google sy ny IBM ary napetraka mba hanatsarana ny fampandehanana ireo karazana rindrambaiko informatika sasany, araka ny tatitra avy amin'ny Intercept . Nanamboatra fitaovana fanarahamaso ara-teknika mahery vaika izay nampiasain'ny manam-pahefana tany Shina, Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra ny Semptian mba hisintonana ireo mailaka manokana, lahatsoratra ary tantara antseraseran'ny olona amin'ny aterineto. Nahafahan'ny IBM sy ny Xilinxon, mpanamboatra “puce” amerikana hanamboatra “microprocesseur” ahafahan'ny solosaina manadihady amin'ny fomba mahomby ireo angon-drakitra marobe ny fiarahamiasa. Nilaza tamin'ny mpanangom-baovao iray miseho ho mpanjifa ny solontena iray avy any Semptian fa ankoatra ny orinasa nomerika malaza be any Shina, nametraka rafitra fanarahamaso faobe ao amin'ny firenena tsy notononina anarana ao amin'ny faritra MENA ny orinasa.
Nandidy ny Facebook mba handoa vola ny sampan-draharahan'ny varotra Amerikana – saingy ampy ve ny nangatahan'izy ireo?
Miatrika onitra 5 miliara dolara  avy amin'ny Komity Ara-barotra Federaly Amerikana ny Facebook noho ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo mifandraika amin'ny fanitsakitsahana ny data nataon'ny Cambridge Analytica, izay nampiasa ireo vaovao tsiambaratelo azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna avy amin'ireo mpiserasera Facebook 87 tapitrisa ny orinasa mpanadihady mba hitaomana ireo mpifidy tamin'ny fifidianana Amerikana 2016. Ity no onitra lehibe indrindra napetraky ny Vaomiera tamin'ny orinasan'ny teknolojia, saingy mbola milaza ireo mpiaro ny tsiambaratelo fa tsy misy dikany amin'ny Facebook, izay nahazo vola mitentina 15 miliara dolara mahery tamin'ny fidiram-bola fotsiny tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2019.
(Can’t) Picture This 2: An Analysis of WeChat’s Realtime Image Filtering in Chats  – Jeffrey Knockel and Ruohan Xiong, Citizen Lab
Are we just ticking boxes? Bringing up and expanding notions of gender in internet policy and governance  – Smita, GenderIT.org
Misorata anarana ao amin'ny Netizen Report 
Afef Abrougui , Ellery Roberts Biddle , Maxim Edwards , Nwachukwu Egbunike , L. Finch , Leila Nachawati  sy Qurratulain Zaman  no niara-nanoratra ity tatitra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/05/142334/
 fito taona an-tranomaizina: https://advox.globalvoices.org/2019/07/11/nigerian-students-face-cybercrime-charges-for-criticising-their-university-online/
 Manao fanentanana : https://twitter.com/hashtag/FreeMadonna7Now?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
 Nomena fahafahana vonjimaika : http://www.signalng.com/attack-on-free-speech-court-releases-6-students-detained-over-facebook-post-since-february/
 nampangain'ny polisy: https://advox.globalvoices.org/2019/07/16/kremlins-new-law-against-online-disrespect-proves-hard-to-implement/
 lalàna : http://kremlin.ru/acts/news/60085
 Nizara rohy: https://zona.media/news/2019/07/15/skazochniy
 nanamarika tao amin'ny fantsony Telegram : https://t.me/pchikov/2396
 Mubashir Bukhari: https://twitter.com/BukhariMubasher
 Namerina ny fidirana amin'ny aterineto: https://advox.globalvoices.org/2019/07/09/post-election-crackdown-in-mauritania-internet-shutdown-lifted-journalist-remains-in-detention/
 Miantso ny orinasan'ny fifandraisan-davitra MTN : https://mg.co.za/article/2019-07-10-mtn-contributed-to-human-rights-violations-in-sudan-say-23-civil-society-groups
 OpenPOWER Foundation: https://openpowerfoundation.org/about-us/
 tatitra avy amin'ny Intercept: https://theintercept.com/2019/07/12/semptian-surveillance-mena-openpower/
 Miatrika onitra 5 miliara dolara: https://www.theguardian.com/technology/2019/jul/12/facebook-fine-ftc-privacy-violations
 mpiserasera Facebook 87 tapitrisa : https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/08/facebook-to-contact-the-87-million-users-affected-by-data-breach
 (Can’t) Picture This 2: An Analysis of WeChat’s Realtime Image Filtering in Chats: https://citizenlab.ca/2019/07/cant-picture-this-2-an-analysis-of-wechats-realtime-image-filtering-in-chats/
 Are we just ticking boxes? Bringing up and expanding notions of gender in internet policy and governance: https://www.genderit.org/editorial/are-we-just-ticking-boxes-bringing-and-expanding-notions-gender-internet-policy-and
 Misorata anarana ao amin'ny Netizen Report: http://eepurl.com/Y-f11
 Maxim Edwards: https://globalvoices.org/author/maxim-edwards/
 Nwachukwu Egbunike: https://globalvoices.org/author/nwachukwu-egbunike/
 Qurratulain Zaman: https://globalvoices.org/author/annie/